ဒေါင်ဥ (or) ဒေါင်းဥ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Entertainment » ဒေါင်ဥ (or) ဒေါင်းဥ	22
ဒေါင်ဥ (or) ဒေါင်းဥ
Posted by ဇီဇီ on Apr 14, 2016 in Entertainment, History, Literature/Books, Poetry | 22 comments
ဒီမှာတော့ ဒေါင်ဥ ဆိုပါ့လားး ရောင်းရင်းးတို့..!!
ပျင်းတကာ့ ထိပ်ခေါင်တင် says: ရှင်းဘာ အာ့ရှင်းဘာ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 154
ပျင်းတကာ့ ထိပ်ခေါင်တင် says: အတည်ပေါက်ရေးရရင်တော့ သတ်ပုံအမှားလို့ ထင်တာပါပဲ..
original ကိုမဖတ်ဖူးပေမဲ့ တချို့စာလုံးပေါင်းတွေမှာ အသံတောင် ဘယ်လိုထွက်ရမှန်း မသိလောက်တဲ့စကားလုံးတွေ ရှေးပညာရှင်တွေ မသုံးလောက်ဘူးထင်တာပဲ
ခင်ဇော် says: အက်ဒီရှင်း အများကြီးး ရှိတယ်ထင်ရဲ့..
Wow says: တဒေါင်ရှိတဲ့ဥ လို့ ဆိုလိုတာမြန်းလား
အိုဘယ့် ဒေါင်းဥ ချစ်သူများ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12395
ခင်ဇော် says: တေဗျဇီ..
ဒေါင်းဥ ကိစ္စမှပဲ ပြေးးလာဒယ်..
Wow says: မှားကုန်ဂျမာ စိုးလို့ပါအေ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 523
ဂျက်စပဲရိုး says: ဒေါင် လား ဒေါင်း လား အသာထားလို့
သူရေးထားတဲ့ စာကို ဖတ်နေတာ ခုထိ တစ်တစ်ခွခွ နားမလည်သေးဘူးရယ်
ခက်ဆစ်းတစ်တစ်ခွခွ = သေသေချာချာ :P :P :P
ခင်ဇော် says: အမယ်မယ်မယ်!!
တစ်တစ်ခွခွ တစ်ခွ အဲလေ သိဂျင်နေသေးတာ။
မောင်ဂီတို့ တဂျီးတို့ ဆောရိုးတို့။
ယမကာကျော်စွာ အူးမြောက်မြောက် (B.E) says: တဒေါင်လောက်ရှိတဲ့ အုကို ဆိုလိုတဲာ နေမှာပါလေ
ခင်ဇော် says: ဂေါ်ဇီလာ တို့ ဒိုင်နိုဆောတို့ ဥ ပဲ နေမှာ။
kai says: ဂိုဂယ်လိုက်တော့… အောက်ကအတိုင်းတွေ့တယ်…။
ဒေါင်ဥတရားစခန်ရှိသကိုး…။ သွားချင်တှာ…။ :-)
ခင်ဇော် says: ဆိုတော့
အဖြေ အတိအကျ မသိဘူး ဆိုပါတော့??
kai says: ရှိပါတယ်..။ ဒေါင်းဥပါ..။
အသက် ၁၀- ၁၃နှစ်လောက်.. မင်းသမီးပစ္စည်း..။ ဒေါင်းဥပေါ့..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12162
Thint Aye Yeik says: အဲ့ စာပိုဒ်လေးကို ဥပုည ဖြစ်ဖြစ် ဥကြောင်ဖြစ်ဖြစ်
ခင်ဇော် says: ဪ။
ယဉ်ကျေးအောင် ရေးထားတဲ့ ဟာကို သူတို့ ကို ဘာသာပြန်ခိုင်းအူးမယ် ဟုလားး
အန်ကယ်လေးတို့ကိုပါ ရုပ်ရှင်ရိုက်ခိုင်းလိုက်ရင် ကောင်းမယ်။
sorrow says: ..ရွာသားတွေလေ..တယ်မပြောချင်ဘူး…ဒေါင်ဥနဲ့ ဒေါင်းဥငြင်းနေသေး…အရေးကြီးတာ..နီလာသီးဗျ…နီလာသီး…ဘာမှမသိဘူး…အငိငိငိ
ခင်ဇော် says: အပြာရောင် အဆင်းရှိလို့လားး
အဓိက က အဓိက ပဲတဲ့၊
မြစပဲရိုး says: ဒေါင်ဥ ပါ ဆိုမှ ဒေါင်ဒေါင်မြည် တဲ့ ဥ ကို ခေါ်တာနေမှာပါ့ ဇီကလေးရဲ့။
ဟုတ်မဟုတ် သံချောင်း နဲ့ တီးကြည့် ဖို့ ကောင်းတယ်။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12395
ခင်ဇော် says: အရီးကော်မန့်ကြီး ဖတ်ပြီးးး
sorrow says: ..ဒီနေရာမှာ ပြောစရာရှိလာတာက ..ပျို့ရေးသူက အရှေ့တိုင်းဆန်တဲ့သေးသေးလေးကိုပစ်မှားလို့…..သူသာအနောက်တိုင်းသားဆိုရင်
..ကျွဲကောခန့်မျှ အိမွမွကို လို့ရေးလိမ့်မယ်ထင်..
အောင် မိုးသူ says: နီလာသီးတဲ့ ဟိဟိ
လုံမလေးမွန်မွန် says: အို.. နာဘာဒေ လာဖတ်မိပါလိမ့်.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel replyYou must be logged in to postacomment.	My Points	You need to be logged in to view your points.